1 Korintianina 14 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Korintianina 14:1-40
14 Miezaha mafy hifankatia, nefa miezaha mafy koa hahazo ny fahaizana omen’ny fanahy,+ indrindra fa ny haminany.+ 2 Fa izay miteny amin’ny fiteny samihafa dia tsy miteny amin’olona fa amin’Andriamanitra, satria tsy misy mahazo izay lazainy,+ fa ny fanahy no mahatonga azy hilaza zava-miafina masina.+ 3 Fa izay maminany kosa dia mampahery+ sy mandrisika ary mampionona ny olona amin’izay lazainy. 4 Izay miteny amin’ny fiteny samihafa dia mampahery ny tenany, fa izay maminany kosa mampahery ny fiangonana. 5 Tiako hiteny amin’ny fiteny samihafa+ ianareo rehetra, nefa aleoko ihany ianareo maminany.+ Eny, izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin’ny fiteny samihafa,+ raha tsy hoe mandika teny angaha izy, mba hahazoan’ny fiangonana fampaherezana. 6 Raha izao aho, ry rahalahy, no tonga any aminareo miteny amin’ny fiteny samihafa, dia inona no soa hataoko aminareo raha toa aho ka tsy mampiharihary zavatra+ tsy fantatrareo na milaza fahalalana+ na faminaniana na fampianarana aminareo? 7 Maneno, ohatra, ny zavatra tsy mananaina,+ na sodina na harpa. Raha tsy mamoaka feo samy hafa anefa ilay izy, ahoana no hahafantarana hoe inona izany feon-kira avoakan’ny sodina na avoakan’ny harpa izany? 8 Raha tsy mazava tsara tokoa ny antso ataon’ny trompetra, iza no hiomana hiady?+ 9 Toy izany koa fa raha tsy milaza teny mora azo+ ny lelanareo, ahoana no hahafantarana izay lazainareo? Hiteny amin’ny rivotra+ fotsiny ianareo, raha ny marina. 10 Mety hisy feo maro be isan-karazany amin’ny fiteny eo amin’izao tontolo izao, nefa samy misy heviny izy ireny. 11 Koa raha tsy azoko àry ny hevitr’izay lazaina, dia ho vahiny+ amin’ilay miteny aho, ary ilay miteny kosa ho vahiny amiko. 12 Dia toy izany koa ianareo: Koa satria maniry fatratra ny fanomezan’ny fanahy+ ianareo, dia miezaha koa hanana be dia be amin’izany mba hampaherezana ny fiangonana.+ 13 Koa aoka àry izay miteny amin’ny fiteny samihafa hivavaka mba hahay handika teny.+ 14 Fa raha amin’ny fiteny samihafa no ivavahako, dia ny fanomezan’ny fanahy izay noraisiko no mivavaka,+ fa ny saiko kosa tsy mahazo ny hevitr’izay lazaiko. 15 Inona àry no hatao? Hampiasaiko ny fanomezan’ny fanahy rehefa mivavaka aho, nefa hampiasaiko koa ny saiko. Ny fanomezan’ny fanahy no hihirako fiderana,+ nefa ny saiko koa no hihirako fiderana.+ 16 Fa raha amin’ny alalan’ny fanomezan’ny fanahy no anaovanao fiderana, ahoana no hilazan’ny olon-tsotra eo am-pitoerany eo hoe “Amena”+ amin’ny fisaorana ataonao, nefa tsy fantany izay lazainao? 17 Marina fa tsara ny fomba isaoranao, nefa tsy mahazo fampaherezana+ ny hafa. 18 Misaotra an’Andriamanitra aho fa miteny amin’ny fiteny samihafa mihoatra noho ianareo rehetra.+ 19 Eo amin’ny fiangonana anefa, dia aleoko milaza teny dimy azon’ny saiko mba hampianarako ny hafa koa, toy izay hilaza teny iray alina amin’ny fiteny samihafa.+ 20 Ry rahalahy, aoka ianareo tsy ho zaza raha ny amin’ny fahaiza-misaina,+ fa aoka ho zaza bodo raha ny amin’ny faharatsiana,+ nefa kosa ho olon-dehibe raha ny amin’ny fahaiza-misaina.+ 21 Izao no voasoratra ao amin’ny Lalàna: “‘Ny lelan’ny hafa firenena sy ny molotry ny vahiny+ no hitenenako amin’ity vahoaka ity,+ nefa na amin’izany aza dia mbola tsy hihaino ahy ihany izy’, hoy i Jehovah.”+ 22 Koa ny fitenenana amin’ny fiteny samihafa dia famantarana+ ho an’ny tsy mpino,+ fa tsy ho an’ny mpino, ary ny faminaniana kosa ho an’ny mpino,+ fa tsy ho an’ny tsy mpino. 23 Raha mivory eo amin’ny toerana iray àry ny fiangonana manontolo ka samy miteny amin’ny fiteny samihafa ny rehetra,+ nefa miditra ny olon-tsotra na ny tsy mpino, tsy holazainy fa adala ve ianareo? 24 Fa raha samy maminany kosa ianareo rehetra ary misy tsy mpino na olon-tsotra miditra, dia ho tsapany fa mananatra azy ny rehetra+ sady mandinika azy tsara. 25 Koa hanjary hiharihary+ izay miafina ao am-pony ka hiankohoka izy ary hivavaka amin’Andriamanitra, sady hilaza hoe: “Tena eo aminareo tokoa Andriamanitra.”+ 26 Inona àry no hatao, ry rahalahy? Rehefa mivory ianareo, dia misy manana salamo, misy mampianatra, misy milaza ny zavatra naharihary taminy, misy miteny amin’ny fiteny samihafa, ary misy mandika teny.+ Aoka ny zava-drehetra hatao mba hampaherezana.+ 27 Ary raha misy miteny amin’ny fiteny samihafa, dia aoka izy ireo hoferana ho roa na telo, raha be indrindra, ka hifandimby. Ary aoka hisy handika teny.+ 28 Fa raha tsy misy mpandika teny, dia aoka izy hangina eo amin’ny fiangonana ka hiteny amin’ny tenany ihany+ sy amin’Andriamanitra. 29 Ankoatra izany, dia aoka ho mpaminany+ roa na telo no hiteny, ary aoka ny hafa hamantatra ny hevitr’izany.+ 30 Raha misy amin’izay mipetraka eo anefa mahazo fanambarana naharihary taminy,+ dia aoka hangina ilay voalohany. 31 Ary samy afaka maminany+ ianareo rehetra, fa mandeha tsirairay, mba hianaran’ny rehetra sy hampaherezana+ ny rehetra. 32 Ary tokony ho hain’ny mpaminany ny mifehy ny fanomezan’ny fanahy haminany. 33 Fa Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fikorontanana,+ fa Andriamanitry ny filaminana.+ Toy ny any amin’ny fiangonana rehetran’ny olona masina, 34 dia aoka ny vehivavy hangina+ rehefa eo anivon’ny fiangonana, fa tsy mahazo miteny izy ireo. Aoka kosa izy hanaiky,+ araka ny lazain’ny Lalàna.+ 35 Fa raha misy zavatra tiany ho fantatra kosa, dia aoka izy hanontany ny vadiny any an-trano, fa mahamenatra+ raha miteny eo anivon’ny fiangonana ny vehivavy. 36 Ahoana hoe? Avy taminareo ve no nivoahan’ny tenin’Andriamanitra,+ sa hatreo aminareo ihany no tongany? 37 Raha misy mihevi-tena ho mpaminany na ho manana fanomezan’ny fanahy, dia aoka izy hanaiky izay soratako aminareo, satria didin’ny Tompo izany+ soratako izany. 38 Fa raha misy tsy manaiky, dia avelao izy tsy hanaiky. 39 Koa miezaha mafy hahazo ny fahaiza-maminany,+ ry rahalahiko, nefa koa aza rarana ny fitenenana amin’ny fiteny samihafa.+ 40 Fa aoka ny zava-drehetra hatao amim-pahamendrehana sy amim-pilaminana.+
1 Korintianina 14